Ihe ị ga-ahụ na obodo Andorra | Akụkọ Njem
Andorra bụ obodo nwe obodo amaara ama Isi nke Andorra, nke dị n’agbata Spain na France. Ọ bụ microstate kasị ukwuu na Europe na ebe a maara nke ọma ịzụta ụfọdụ ihe na-enweghị ụtụ isi. Ma gafere ihe ndị a dị iche, a ghaghị iburu n'uche na ọ bụ ebe na-enye ọtụtụ ebe nkiri njem nleta iji nọrọ izu ụka ma ọ bụ ezumike ogologo.
Andorra mara maka ya ọdịdị ala na site na ebe ntụrụndụ. Nke a bụ akụkụ nke amara ya, mana enwere ọtụtụ ihe, site na obere obodo nta na-atọ ụtọ ruo na ụlọ ndị Romanesque, obodo ya na ọdụ ụgbọelu. Enwere ọtụtụ ihe ịmara na Andorra.
3 Ọdụ ụgbọ mmiri Ordino
4 Ebe nsọ Meritxell
5 Utezọ njem site na Romanesque
6 Ski na Grandvalira
7 Ngosi ihe mgbe ochie na Andorra
Ndị na-aga obodo Andorra la Vella na-emekarị ya na ebumnuche nke ịzụrụ ụdị ịzụta niile. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe anyị chọrọ, ọbụlagodi otu ụbọchị, mgbe ahụ anyị ga-emerịrị gaa Mertixell Avenue, jupụtara n'ụdị ụlọ ahịa niile. N'aka nke ọzọ, n'ime obodo ị ga-ahụrịrị ihe osise Dalí site na usoro elekere gbazee, nke a pụrụ ịmata nke ọma, nke dị na Plaza de la Rotonda. N'ime ụlọ akụkọ ihe mere eme ị nwere ike ịnụ ụtọ gastronomy kachasị mma na La Birrería, ebe maka ndị biya biya.
Este spa center bụ kasị ukwuu na Europe na ebe izuike. Ọ nwere ọtụtụ ebe nkiri maka ndị chọrọ iwepụ nrụgide. O nwere ọdọ mmiri nke nwere mmiri ọkụ na 32ºC, ọdọ mmiri dị n'ime, Jacuzzi, akwa afụ, hydromassages ma ọ bụ ihe nkpuchi mmiri. Facilitieslọ ọrụ ahụ gụnyere ime ụlọ mgbatị ahụ, Sirocco bath, hammam, ụlọ ezumike ma ọ bụ Jacuzzi dị n'èzí. Onu ogugu ihe anyi ga eme na etiti a ga eme anyi obi uto otutu oge. Nnukwu uru bụ na anyị ga-ekpori ndụ nke ukwuu ka anyị na-aga na nleta anyị.
Ọdụ ụgbọ mmiri Ordino
Malite na obodo Canillo ị nwere ike iru Port nke Ordino, ebe mara mma mara mma iji nwee ọ enjoyụ kacha mma Andorra, ala ya. Na ụzọ n'elu ị ga-akwụsị na Echiche Roc del Quer, nke bụ ikpo okwu nghọta. Mgbe ị ruru n'elu ọdụ ụgbọ mmiri ị pụrụ ịnụ ụtọ echiche nke ọnụ ọnụ nke Andorra. O doro anya na ihe dị mkpa na mba a.
Ebe nsọ Meritxell
Ebe nsọ nke Senyora de Meritxell anyị dị na obodo Meritxell. Ejiri ọtụtụ ụlọ rụọ ebe nsọ ahụ. Jiri otu gụọ ebe nsọ ohuru, ulo uka ochie nke ndi Romanesque na okporo uzo eze nwere oratories na ugbo mmiri. Nke a bụ ebe nsọ kachasị mkpa na Andorra niile. N'ime ụlọ ụka ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe ngosi Meritxell Mermòria, nke metụtara ntinye ofufe nye onye nsọ a nke ndị Andorra.
Utezọ njem site na Romanesque
Anyị na-ekwu maka otu ụzọ gafere na Romanesque n'ihi na na Andorra enwere ọtụtụ ụka a na-echekwa site na oge nka, ọ bụ ezie na ụfọdụ dị mkpa karịa ndị ọzọ. N'ime ha, ụka Roman-Roman nke dị na Santa Coloma pụtara ìhè, bụ nke ejiri nnukwu ụlọ mgbịrịgba Lombard gbaa gburugburu na narị afọ nke iri na abụọ. Chọọchị nke Sant Joan de Caselles na Canillo ọ bụ ụlọ okpukpe ọzọ nwere nnukwu mmasị. Ọ bụ site na narị afọ nke iri na abụọ ma nwekwaa ụlọ mgbịrịgba nke Lombard, akụkụ anọ na nke a, dị ka ọ dị na mbụ. Chọọchị ndị ọzọ ị ga-eleta nwere ike ịbụ Sant Martí de la Cortinada, Sant Cerni de Nagol ma ọ bụ Santi Climent de Pal.
Ski na Grandvalira
Grandvalira ski Resort bụ ihe kachasị mkpa na Andorra. N'ime ya ị nwere ike ịnụ ụtọ kilomita nke mkpọda ugwu na ọtụtụ ọrụ. Enwere ụlọ akwụkwọ ski maka afọ niile na ị nwekwara ike ịme ihe ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na iji nkịta na-atụgharị uche na-aga ije n'elu mmiri ma ọ bụ snowmobiles. Echefula inweta ski skai maka oge ski.
Ngosi ihe mgbe ochie na Andorra
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ụzọ na-achọ ntakịrị ọrụ ọdịbendị, na Andorra enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nwere ike ịmasị. Na National Automobile Museum na Encamp O nwere ugbo ala di iche iche, nke n’egosiputa ntoputa nke ha ghafeela. Nchịkọta ya bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na Europe, ya mere ọ nwere nnukwu mmasị. Museumlọ ihe ngosi nka nke Art dị nsọ nwere ihe dị iche iche eji eme akwa, ihe eji akwa na akwụkwọ. Casa Cristo Ethnographic Museum, dịkwa na Encamp, bụ ebe na-adọrọ mmasị iji mụta banyere ụdị ndụ ụlọ Andorran na narị afọ nke XNUMX. Ebe ọzọ dị iche iche bụ Museum of Miniatures nke Nicolai Siadistry na mkpokọta microminiature. Enwere ọtụtụ ụlọ ebe ndebe nka ndị ọzọ nwere ike ịmasị, dabere na isiokwu anyị masịrị anyị, dị ka Comic Museum, Museum Motorcycle, Toba Museum, Museum Perfume ma ọ bụ Museum Museum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Andorra